छाला बनाम कपडा सोफा
मानिसहरु प्राय यी प्रश्नहरु को बारे मा सोच्छन् जब तपाइँको घर को लागी एक नयाँ सोफा किन्न, जुन शैली धेरै आकर्षक छ, कुन सामग्री लामो समय सम्म रहन्छ, छाला वा कपडा सोफा जो एक राम्रो? वास्तवमा, त्यहाँ धेरै कारकहरु छन् कि विचार गर्न को लागी बजेट छ, सान्त्वना, शैली, आदि सबै पछि यो तपाइँको जीवन को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डहरु मध्ये एक हो. छाला बनाम कपडा सोफा को मामला मा, यो तपाइँ कसरी बस्नुहुन्छ र तपाइँ के लाइभ जाँदै हुनुहुन्छ द्वारा निर्धारित गरिनेछ. यसैले, हामी तल बिन्दुहरु लाई सूचीबद्ध गर्न को लागी तपाइँको घर को लागी आदर्श सोफा किन्न को लागी उल्लेख गर्दछौं.
छाला र कपडा सोफा किन्ने बेला के विचार गर्ने
जब यो सान्त्वना को लागी आउँछ यो व्यक्तिगत भावना मा आधारित अधिक व्यक्तिपरक छ. तेसैले तपाइँ के गर्नुहुन्छ मात्र आफैलाई सोध्नु हो, जो एक तपाइँको शरीर मा राम्रो लाग्छ?
साधारण अनुभूति यो छ कि कपडा छालाको तुलनामा धेरै सहज छ किनकि यो नरम छ, अधिक लचिलो, र कम तापमान-कोठा को स्थिति को लागी उत्तरदायी. तर यो कपडा सामाग्री र समर्थन प्रणाली मा निर्भर गर्दछ. सामन्यतया, कपडा सोफा छाला सोफा भन्दा सास फेर्न को लागी छन्. यदि तपाइँ लामो समय को लागी बस्नुहुन्छ, तपाइँको नितम्ब कम तातो छ, आर्द्र र भरिएको, जसले मानिसहरुलाई अधिक सहज महसुस गर्दछ र चिड़चिड़ापन कम गर्दछ. तथापि, एउटा कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कि केहि सस्ता कपडाहरु ढीला हुनेछन् र कुशन मा गुच्छा बनाउन.
छाला सोफा को लागी, यो प्राय मौसम बाट प्रभावित हुन्छ. जाडोमा, छाला सोफा साँच्चै धेरै चिसो हुन सक्छ वा साइट को लागी, तर जब सम्म तपाइँ यसलाई एक कम्बल लिनुहुन्छ मानव शरीर को तापमान को लागी एक नजिक सम्म तातो हुनेछ. गर्मी याममा, यदि तपाइँसँग कुनै वातानुकूलन स्थापना छैन, छाला सोफा कपडा जो तपाइँ पसीना र छालामा टाँस्न को लागी कारण भन्दा कूलर हो. पक्कै पनि, हामी एक जलवायु नियन्त्रण हालत स्थापित गर्न सुझाव दिन्छौं, जसले तातो मौसममा धेरै आराम दिन्छ.
छाला बनाम को लागी लागत को बहस मा. कपडा सोफा, यदि दुई एउटै शैली मा छन्, एउटै गुणस्तर फ्रेम संग बनाइएको, छाला सामान्य मा अधिक महंगा छ.
मैले दुबै छाला र कपडा सोफा Wayfair मा खोजे, अघिल्लो परिणाम आफ्नो फरक देखाउँछन्. छाला कपडा भन्दा धेरै उच्च छ. तर, त्यहाँ पनी प्रसिद्ध डिजाइनरहरु द्वारा बनाईएको केहि विलासी कपडाहरु छन् कि यी छाला सोफे को लागत भन्दा बढी छ. त्यहाँ केहि कम ग्रेड छाला सोफा कपडा भन्दा सस्ता छन् यदि तपाइँ ध्यान र आराम मा उपस्थिति लिनुहुन्न. मूल्य सामान्यतया गुणस्तर र सोफा को आयु प्रतिबिम्बित गर्दछ, तेसैले कुनै पनी छाला कपडा भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ यदि यो पर्स मा क्षतिग्रस्त छैन.
त्यसकारण, पहिलो तपाइँले विचार गर्नु पर्छ बजेट हो, त्यसपछि घरको सजावट, पारिवारिक संरचना. यो एक कपडा सोफा जो आधा लागत बचाउन सक्छ छनौट गर्न को लागी अधिक किफायती छ. छाला सोफा राम्रो वित्तीय अवस्था वा रिसेप्शन कोठा को लागी किन्न को लागी व्यक्तिहरु को लागी अधिक उपयुक्त छन्. जबकि कपडा sofas धेरै परिवारहरु को लागी अधिक उपयुक्त छन् कि धेरै शैलीहरु वा लचीला मूल्यहरु.
कपडा र छाला सोफा दुबै ढाँचा र छनौट गर्न को लागी रंग को एक व्यापक शैली छ, जुन सम्पूर्ण कोठा संग मिल्नु पर्छ.
सामन्यतया, कपडा काउचहरु छाला को तुलना मा पैटर्न को आफ्नो dizzying सरणी को लागी अधिक विकल्प प्रदान गर्दछ, रंगहरु, आकार, र असबाब प्रविधि. यदि केवल एक कपडा सोफा राख्ने विचार गर्नुहोस् तब जब तपाइँको घर सजावट केहि हेरचाह गर्न को लागी, cuz तपाइँ कोठा संग भेट्न को लागी कुनै पनी शैली र रंग पाउन सक्नुहुन्छ. यो धेरै मानिसहरु को लागी पहिलो छनौट भएको छ, मुख्यधारा अमेरिकी कपडा आफ्नो तंग संरचना बाट लाभदायक सोफा द्वारा प्रतिनिधित्व, परिष्कृत सामग्री, वैज्ञानिक डिजाइन, सुरुचिपूर्ण रचनात्मकता र विशाल आराम.
उल्टो, केहि घर सजावट एक सुपर उच्च गुणस्तरीय छाला सोफा मेल गर्न सक्षम छ. यदि कोठा को लागी फिट छैन, एक परिष्कृत प्रभाव पठाउन सकिन्छ. पक्कै यदि राम्रो संग मेल खान्छ यो एक कोठा मा एक अद्वितीय भव्यता प्रदर्शन गर्न सक्छ कि एक कपडा मा नक्कल गर्न को लागी मुश्किल छ. छाला को सबै भन्दा साधारण chesterfield शैली जो धेरै परम्परागत छ. तथापि, नियम अनुसार, छाला सोफा सामान्यतया आफ्नो कपडा समकक्षहरु भन्दा अधिक फैशनेबल छन्. यदि तपाइँ समकालीन वा आधुनिक रूप लिन चाहानुहुन्छ, यो sleeker र धेरै कपडा sofas भन्दा धेरै उच्च अन्त देखा पर्न जान्छ.
चाहे एक छाला होस् वा कपडा सोफा उनीहरु सबै भव्यता र परिष्कार तपाइँको घर को लागी प्रदान गर्दछन्, तपाइँको शयनकक्ष, तपाइँको भोजन कोठा, वा तपाइँको लाउन्ज कोठा. यसैले, यो व्यक्तिगत छनौट को लागी देखिन्छ. के तपाइँ तपाइँको सोफा तपाइँको बैठक कोठा मा मुख्य डिजाइन तत्व हुन चाहानुहुन्छ? कुन सजावट शैली तपाइँ रुचाउनुहुन्छ, पुरानो वा आधुनिक? के तपाइँ तपाइँको घर को लागी बरु सजिलो हुन को लागी आशा गर्नुहुन्छ? सोफा को लागी छनौट गर्दा हामी सबै विचार गर्न जाँदैछौं.
आराम बाहेक, लागत र शैली, मर्मत संकोच गर्न को लागी एक प्रमुख कारक हुन सक्छ. छाला सफा गर्न र कम समय लागत धेरै सजिलो छ, जबकि कपडा खाली र नियमित सफा गर्न को लागी आवश्यक छ. एक छालाको सोफा दशकौं सम्म रहन सक्छ यदि ठीक संग हेरचाह गरियो. तथापि, जबकि यो दरार र विभाजन रोक्न लगातार वातानुकूलित हुनुपर्छ.
पनरोक सुविधा को कारण, तपाइँ के गर्नुहुन्छ सफा पानी मा तौलिया पूरै गीला छ, यो बाहिर wring र सोफा को सतह पखाल्नुहोस्. तथापि, यदि दीर्घकालीन रखरखाव को लागी यो विशेष तेल लगाउने र एपिलेशन को आवश्यकता छ. थप, एक पटक छाला को सोफा शारीरिक रूप बाट क्षतिग्रस्त हुन्छ, बाहिरी आवरण बदल्न सकिदैन, जसलाई सम्हाल्न अझ गाह्रो छ. बाहेक, बिराला जस्तै केहि जनावरहरु सोफा clawing गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ. क्षति को मामला मा, एक सोफा सेट प्याक वा बिरालो को लागी विचलित गर्न को लागी केहि खेलौनाहरु किन्नुहोस्. यो ध्यान दिनु पर्छ कि छाला सोफा अपेक्षाकृत गाह्रो र खरोंच मर्मत गर्न गाह्रो छ, त्यसैले यदि तपाइँ बच्चाहरु वा घर मा घरपालुवा जनावरहरु छन्, कपडा सोफा अधिक उपयुक्त छन्.
कपडा को लागी, यो बरु सुविधाजनक र बनाए राख्न को लागी सरल छ. कपडा सोफा सेट को धेरै हटाउन र धोउन सकिन्छ. यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो यो फोहोर असबाब संग सम्झौता गर्न को लागी परेशान छ, तपाइँ यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई ड्राई क्लीनरमा पठाउन सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँ गर्मी को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ मात्र चटाई राख्नुहोस् जब गर्मी आउँछ र जाडो मा एक तातो प्याड संग बदल्नुहोस्. तथापि, कपडा सोफे गोली र बारम्बार प्रयोग संग पातलो लगाउन जाँदैछन्, यसैले एक उच्च गुणस्तर सोफा छनौट जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ.
कपडा सोफा सामान्यतया रेशम बाट बनेको छ, साटन, भांग, corduroy र अन्य लुगा प्रतिरोधी सामग्री. प्रति यसको आफ्नै सुविधाहरु छन्. रेशम र साटन कपडा सोफा भव्यता र विलासिता व्यक्त, मानिसहरु लाई एक शानदार भावना प्रदान गर्दै. तथापि, हेम्प र कर्डुरॉय सोफा भारी र क्लासिक देखिन्छ, र यो एक प्राकृतिक र सरल शैली को रूप मा देखिन्छ.
छाला सोफा सामाग्री को लागी छनौट ठूलो छ, पनि. फरक छाला बिल्कुलै फरक प्रभाव उत्पन्न. छाला सोफा सुविधाहरु मा केन्द्रित छन्, प्राकृतिक लोच, काउहाइड को कठोरता, नाजुक सतह, उच्च रंग स्थिरता, राम्रो लोच, हावा पारगम्यता, र उच्च यांत्रिक शक्ति. सबैभन्दा उत्कृष्ट यसको उच्च आँसु शक्ति र तन्य शक्ति हो जसले छाला सोफा जीवनकाल मा सुधार गर्दछ. तिनीहरू प्राय: दुई प्रकारमा विभाजित हुन्छन्, पातलो छाला वा गाढा. एक पातलो छाला सोफा को डिजाइन एक सरल र उज्यालो शैली को लागी खडा छ.
उच्च गुणस्तरीय छाला सोफा स्पर्श गर्न को लागी नरम छन्, बस्न को लागी सहज, जाडोमा तातो र गर्मीमा चिसो. राम्रो बनावट को कारण, मूल्य कपडा भन्दा महँगो छ. त्यहाँ कपडा सोफे को धेरै प्रकार हो जो सबै मानिसहरु लाई फरक फरक भावनाहरु छन्. रेशम कपडा बाट बनेको सोफा सधैं मानिसहरुलाई एक महान भावना व्यक्त, र हेम्प बाट बनेको सोफाहरु धेरै सरल छन्. भौतिक दृष्टिकोण बाट, छाला सोफा अधिक टिकाऊ छन्.
त्यहाँ एक तथ्य यो हो कि हामी प्राय: कि छाला सोफाहरु लाई वास्तव मा hypoallergenic बेवास्ता गरी रहेको छ. यदि कसैलाई वातावरणीय एलर्जी छ, तब यो बेकार हुन सक्छ कि कती राम्रो सोफा. कपडा सोफा विपरीत, छाला सोफा कम धूलो कण जाल, घरपालुवा जनावर, र अन्य एलर्जी, जसको परिणाम एलर्जी हुन सक्छ. त्यसो भए, कपडा सोफा संग तुलना छाला को सोफा खाली गर्न को लागी एलर्जीन को लागी असहज को लागी एक तातो ओछ्यान प्रदान गरीएको छ एक राम्रो विकल्प हो. पक्कै पनि, यो असंभव छैन एक कपडा सोफा एलर्जी बाट मुक्त राख्न, तर यो अधिक समय खर्च हुनेछ र एक लामो बाटो मा एक छाला सोफे भन्दा बढी प्रयास लिन्छ
यहाँ केहि उपयोगी प्रश्नहरु आफैलाई सोध्न जब एक कपडा वा छाला सोफा किन्ने छन्:
के तपाइँसँग कुनै घरपालुवा जनावर छ? के तपाइँको घरपालुवा जनावर तपाइँको बच्चा हो? हामी सामान्यतया घरपालुवा जनावर मालिकहरु को लागी कपडा सिफारिश गर्दछौं किनकि उनीहरु आफ्नो क्रल संग महंगा छाला खरोंच गर्न सक्छन्. तथापि, यदि तपाइँ घरपालुवा जनावरमा एक स्मार्ट प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, तब दुबै राम्रो छन्.
तपाइँका बच्चाहरु छन्? के उनीहरु सबै पट्टी को दुर्घटनाहरु को लागी प्रवण छन्? के उनीहरु प्राय सोफा मा खेल्छन्? यदि सबै हो, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, छाला तपाइँ लामो समय सम्म कपडा संग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ. जबकि लगभग कुनै तरिका toddlers को अत्याचार बाट बच्न को लागी, क्षति नियन्त्रण योजना आवश्यक छ.
तपाइँको सोफा एक लामो अवधिको साथी हो कि तपाइँको बदलिएको शैली प्रतिबिम्बित गर्न र तपाइँको विश्राम को आवश्यकताहरु को प्रबंधन गर्न को लागी आवश्यक छ. यद्यपि एक कपडा बनाम छनौट. छालाको सोफा (वा उल्टो) एक सौंदर्य छनौट लाग्न सक्छ, यो तपाइँको घर मा एक टुक्रा को दीर्घायु लाई प्रभावित गर्दछ. राम्रो कुरा हामी हात मा यति धेरै छनौट छ.
कसरी जाँच गर्ने बेला छाला र कपडा सोफा किन्ने
1. बाहिर असबाब जो पर्याप्त तंग हुनुपर्छ जाँच गर्नुहोस्. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै अवांछनीय झुर्रीहरु र उपस्थिति प्रभावित गर्न को लागी तहहरु छन्.
2. सोफा को अस्तर सतह समतल हुनुपर्छ, कुनै हुक बिना, फैलिएको न।, वा स्टेपल, जसले मानिसहरुलाई चोट पुर्याउनेछ र फाटेको कपडा.
3. यदि तपाइँ धातु वा काठ को फ्रेम छुनुहोस्, अझै पनी अवस्थित कोण जो अस्तर कवर एक छोटो समय मा लगाउन को लागी सजीलो छ भन्ने लाग्छ, विशेष गरी बस्ने स्थिति को नजिक.
4. अवलोकन गर्नुहोस् कि ढाँचाहरु ठीक संग मेल खाए, र सिलाई सजावट को लागी प्रयोग गरीन्छ समान रूप बाट दूरी.
5. कुशन सीट को अगाडिको किनारा मा निलम्बित हुनु हुँदैन. यो कुशन को बीच सम्भव भएसम्म संकीर्ण हुनुपर्छ, armrests, ब्याकरेस्ट, र सोफा.
6. जाँच गर्नुहोस् कि armrests र सोफा खुट्टा स्थिर छन्, काठ को सतह चिकनी छ. कुशन पर्याप्त समर्थन र सोफा फिर्ता संग लाइन मा हुनु पर्छ.
7. छाला सोफा प्राय: केहि अस्पष्ट रंगीन aberrations छ, साना दागहरु पनि, त्यसैले हरेक ठाउँ वरपर छाला को रंग ध्यान दिनुहोस्.
असबाब कपडा र छाला प्रकार
धेरैजसो उपभोक्ताहरु असबाब कपडा र छाला को प्रकार जो पनी कपडा वा छाला छनौट गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्दैनन्. असबाब कपडा को प्रकार या त प्राकृतिक फाइबर या मानव निर्मित फाइबर हो. यहाँ कपडा फाइबरहरु को लागी एक संक्षिप्त परिचय छ जब तपाइँ विभिन्न कपडा विकल्पहरु को सामना गरीरहनुभएको छ.
प्राकृतिक फाइबर बिरुवाहरु वा जनावरहरु बाट व्युत्पन्न निरन्तर फिलामेन्ट सामग्री हो. तिनीहरू नरम हुन्छन्, सुन्दर सजावट र रमाईलो, स्पर्श गर्न सहज. त्यहाँ सुविधाहरु को रूप मा चार प्राकृतिक फाइबर छन्.
तातो र तातो राख्नुहोस्; टिकाउ, अन्य कपडा भन्दा वजन; शिकन र दाग प्रतिरोधी; सजीलै रंग लगाउनुहोस्, फीका प्रतिरोधी; जीवाणुरोधी, दुर्गन्ध को प्रतिरोध गर्दछ
सतह चिकनी छ, नरम तर फिसलन छैन; छाला र कपाल प्राकृतिक सेलुलर albumen को कारण हेरचाह; रyes र प्रिन्ट राम्रो संग; पसिनाले कमजोर हुनु, सूर्य, साबुन; माटोको प्रतिरोध गर्दछ, फफूंदी, र कीराहरु; विशेष हेरचाह चाहिन्छ, सुख्खा सफाई
आरामदायक र सास फेर्न; प्राकृतिक फाइबर रसायन मुक्त।; Hypoallergenic र छाला जलन गर्दैन।; नवीकरणीय र बायोडिग्रेडेबल।; मेसिन धुने।; स sh्कुचन र धेरै झुर्री गर्न को लागी प्रवण।; प्राकृतिक फाइबर छिटो तल झर्छन्
कम पर्यावरण प्रदूषण संग प्राकृतिक फाइबर; श्रम-गहन निर्माण गर्न; स्वाभाविक रूपमा, कीरा प्रतिकार; सम्म नमी राम्रो संग अवशोषित गर्दछ 20% आफ्नै तौलको; असाधारण शीतलता र तातो र आर्द्र मौसममा ताजगी; Hypoallergenic, संवेदनशील छाला वा एलर्जी को लागी फिट; फफूंदी र पसिना बाट प्रभावित; क्रीज हटाउन गाह्रो
मानिसले बनाएको फाइबर
सिंथेटिक मानव निर्मित फाइबर रासायनिक संश्लेषण को माध्यम बाट मानव द्वारा बनाईएको हो, प्राकृतिक फाइबर को विरोध मा कि सीधै जीवित जीवहरु बाट व्युत्पन्न छन्. उनीहरुमा नायलॉन सामेल छन्, पलिएस्टर, एक्रिलिक, polyolefin vinyl, आदि. यहाँ यी मानव निर्मित फाइबर प्रकार को सुविधाहरु छन्.
स्ट्रेचिंग र संकुचन को प्रतिरोध गर्दछ; धुने वा सुक्खा सफा गर्न सकिने; सजीलो हेरचाह यो झुर्रियाँ प्रतिरोध गर्दछ, लुप्त हुँदै।; धेरै रसायनहरु प्रतिरोधी; फफूंदी वा पानी अवशोषित गर्दैन; स्थिर र pilling समस्याहरु; तेलको दाग हटाउन गाह्रो हुन्छ; गैर पर्यावरण मैत्री
प्लास्टिक को गोलीहरु पिघ्न बाट उत्पादित, अत्यधिक ज्वलनशील; उच्च तन्य शक्ति; टिकाउ, दाग को लागी प्रतिरोधी; राम्रो थोक र आवरण; आफ्नो रs्ग राख्छ ; गरीब सम्बन्ध गुण, रंग गर्न गाह्रो; सामग्री गिरावट देखाउन सक्छ
हल्का, नरम, र तातो, ऊन जस्तो हात; अन्य फाइबर नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कपास; उज्यालो रंगहरु को लागी रंगहरु; गैर-एलर्जेनिक; कीराको प्रतिरोध गर्दछ, तेल, रसायनहरु, घाम; शरीर बाट नमी टाढा र धुने योग्य छ; पिलि and र घर्षण समस्या बाट पीडित
बलियो अझै तौल कुनै अन्य सामान्यतया प्रयोग हुने फाइबर भन्दा कम हुन्छ; धेरै खिचिएको सामग्री ; अत्यधिक नमी अवशोषक, सास फेर्न सक्ने।; अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी, मोल्ड, फफूंदी र झुर्रियाँ; सजिलै धोए, र तेल खस्ने प्रतिरोधी छन्।; सूर्यको प्रकाश बाट प्रभावित र, उमेर संग पहेँलो; तेल र धेरै रसायन को प्रतिरोध; कम जलन र पिघ्ने बिन्दु
सजिलै संग रyes्ग र ज्वलन्त रंग उत्पादन गर्दछ
रेशम जस्तै देखिने को लागी पेश गरियो, ऊन, वा कपास
चिकनी, टिकाऊ र सस्तो
कुनै स्थिर वा pilling समस्या छैन
अक्सर मिश्रण मा प्रयोग गरीन्छ
सजिलै संग झुर्री हुन्छ जब सम्म उपचार esp धोईयो
नमी अवशोषित गर्न को लागी प्रवण, शरीर को तेल, र पानी
चिसो मौसममा प्रयोग गर्नका लागि प्रवाहकीय सहायक
राम्रो पनरोक प्रदर्शन
विभिन्न सजावट शैलीहरु संग मिश्रण
नरम र एक शानदार लुक छ
उपयोग संग चाँडै बाहिर लुगा लगाउनुहोस्
अत्यधिक धूल अवशोषक
छाला र कपडा सोफा - कुनै पनि शैली को लागी सही मिश्रण
यति धेरै सुझाव दिने बावजुद, मलाई लाग्छ कसैलाई अझै पनी एक छाला वा कपडा को लागी जाने को लागी राम्रो छ भनेर निर्णय गर्न हिचकिचाहट लाग्छ. यहाँ हामी अर्को राम्रो विचार दुबै तपाइँको कोठा मा छ र सुन्दर छाला र कपडा सोफा जो एक भव्य तरीका मा तपाइँको भित्री सूट हुनेछ मिश्रण गर्न को लागी प्रदर्शन गर्दछ।.
दुबै छाला र कपडा सोफा देहाती र भूमध्य आंतरिक मा मिश्रित, धनी र चिकनी बनावट को मूर्त रूप, सुखदायक तटस्थ रंग र गर्मी को भावना. एक छाला सोफा क्लासिक फर्नीचर जो सधैं लक्जरी र पुरानो संग जोडिएको छ को एक प्रकार हो. कपडा असबाब, अर्कोतर्फ, एक साधारण आराम प्रदान गर्दछ, न्यानोपन र घरेलु भावना. एक पटक उनीहरुलाई देहाती भित्री मा मिश्रण, छाला र कपडा सोफा असबाब एक आमन्त्रित रूप मा देख्न को लागी अतिथिहरु लाई स्वागत गर्न को लागी देखिन्छ. शान्त टोन मा नरम तकिया सोफा को लागी एक सही अतिरिक्त हो. सोफा को पुष्प र अलंकृत पैटर्न भित्री सजावट को लागी अर्को आकर्षक आकर्षण जारी. बस कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ आगोमा बस्नुभएको छ र काठ को क्रैकिंग र आगो को नृत्य को आनन्द लिनुहोस्. यो बरु अद्भुत र एक महान भित्री शान्ति हुनेछ?
छाला र कपडा सोफा, यद्यपि यो अधिक परम्परागत डिजाइन को लागी विशिष्ट भएको छ, हामीले आधुनिक आन्तरिक मा आफ्नो सही स्थिति पाएका छौं. ठाडो र तेर्सो रेखाहरु, मिल्दो र विरोधाभासी रंग अद्वितीय आधुनिक डिजाइन हाइलाइट, जुन समकालीन सोफा को एक सामान्य दृष्टि हो. र p प्यालेट क्लासिक कालो मा केन्द्रित छ, सुद्ध सेतो, नेवी नीलो, वा यी रंग ब्लक को एक संयोजन, साथै फैशनेबल खैरो रंग. ग्रे समान रूप मा राम्रो संग कालो वा सेतो संग संयुक्त देखिन्छ. छाला र कपडा मिश्रण परम असामान्य आराम र शैली प्रदान तर सबै मा अनौठो छैन. सुन्दर अनुभागीय सोफा वा कुना सोफा तपाइँको पाहुना र परिवार को लागी बस्ने ठाउँ हो, जो सजीलै समकालीन र minimalist भित्री मा मिश्रण. सजावटी तकियाहरु सामान्यतया एक आधारभूत रंग वा सजावटी ढाँचा बिना एक रंग को केहि रंगहरु सुविधा. एक आधुनिक डिजाइन संग छाला र कपडा सोफा कोठा र एक कुराकानी टुक्रा मा centerpiece हुनको लागी हो. मोड्युलर कन्फिगरेसन तपाइँको आवश्यकता र वरीयता अनुसार बैठक को पुनर्व्यवस्थित गर्न को लागी लचीलापन प्रदान गर्दछ.
एक सोफा सम्पूर्ण कोठा मा एक आवश्यक ठाउँ हो जहाँ तपाइँ चिन्ता हटाउनुहुन्छ, थकित र खराब मूड. यो एक ठाउँ रोचक र न्यानो चीजहरु हरेक दिन हुँदैछ. मलाई विश्वास छ कि छाला वा कपडा सोफा को लागी हजारौं मोडेलहरुमा छनौट गर्न गाह्रो छ. तथापि, जवाफ पक्का छैन जो एक राम्रो छ र तपाइँ र तपाइँको परिवार को लागी. जब सम्म यो तपाइँको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ र घर सजावट को लागी अनुकुल, कि चयन गर्न को लागी एक सुखद कुरा हुनेछ.
ट्यागहरू: सोफा सेट किन्नुहोस्
पोष्ट समय: 2020-11-27